It is me. Ko Niknayman.: October 2007
ဘုန်းဘုန်းသတ်..လက်နက်တွေ မိစ္ဆာတွေကို ၀ယ်ပေးနေတာ.ငတေဇ
Posted by Ko Niknayman at 4:11 AM Links to this post
မနော ဂုဏ်အင် ယုတ်ဘက်မြင်သည်
တွေ့ မြင်သူတိုင်း သိကောင်း.
အတ္တထူပြော ရာဂ တော့
အရမ်းသန်းရွှေငယ်မည်တွင်သည့်
ဟန်ဆောင် ကိုးကွယ် ဘာသာ သာသနာ
ပယ်ခါ ပြောင်းလွဲ ငရဲမကြောက်
သည်သဘောက်အား ပြည်သူ့ အင်အား
တို့ လျှောက်လှန်းလျှက် အောင်ပန်းဆွတ်ခူး
ဒီမို ထူးကို ညီညွတ်ဦးမှဆောင်ကြစို့ ။
ငရဲစခန်းမှ သူ့ အား ခေါ်ဆောင်နေလေပြီ
ပြည်သူ့ ကျိန်စာ သူ့ မှာ အမြဲစူးနေပြီ
သာသနာဖျက်များ နောက်ဆုံးသွားသည့် လမ်းအားသူ မြင်နေရပြီ။
သူထားနေလည်း ရင်ထဲ နှလုံး
မီးပြာဖုံးလျှက် - ယူကြုံးမရ
သူ့ နောင်တကား သေသွားသော်လည်း
သည်ငရဲကား အမြဲ ခြောက်လှန့် နေမည်တည်း။
ငယ်မည်သန်းရွှေဗိုလ်သန်းရွှေနှင့်
သူသေသော်လည်း ယမ မင်းရှေ့ မှောက်
သူမကြောက်လည်း ရောက်ပ အမှန် ရောက်မည် မှန်သည်
ရုပ်ဆိုး အမျိုးမကောင်း စိတ်ထားညစ်ပတ် သည်ဖြစ်ရပ်ကား မြန်မာ့သမိုင်းတွင်
သူလူရိုင်းအား ၀ိုင်းတော်လှန် တုန့် ပြန်ပါမှ ကမ္ဘာလည်းပြေ တာဝန်ကျေမည်
ဒို့တွေစုပေါင်း အောင်စေကြောင်း။
(ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေအတွက် ဂုဏ်ပြု လက်ဆောင်)။
ရေးသားသူ - ယမ မင်း နံပါတ်(၂)။
Posted by Ko Niknayman at 4:06 AM Links to this post
အင်္ဂလန်၊ သြစတြေလျ၊ ထိုင်းနိုင်ငံတို့ မှ လှုပ်ရှားမှုဓါတ်ပုံများ (အောက်တိုဘာလ)။
Posted by Ko Niknayman at 9:50 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 11:21 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 11:20 AM Links to this post
အကိုကြီးတော့ အဖအရာ။ အကြီးကောင်က အဖေထက် သားနှစ်လကြီးတယ်။
တေဇသားတွေကတော့ အငယ်ကတစ်မျိုး အကြီးကတစ်ဖုံနဲ့ ဆိုသလို မိဘရဲ့ ဂုဏ်ယုတ်တွေကို ထုတ်ဖေါ်ပြလေ ရဲ့ ။ အဖေကသန်းရှွှေသမက်ဆိုတော့ သူတို့ လည်း မိုးကျရွှေကိုယ်လေးတွေလိုဘဲ အခွင့်ထူးတွေခံစားပြီး ထင် ရာစိုင်းနေကြတာ။ မြန်မာပြည်တွင်းမှာ ဥပဒေမဲ့လုပ်ချင်ရာလုပ်နေကြတဲ့ ကိုယ်ကျိုး ရှာစီးပွားရေးသမားကြီး အဖေတေဇမျက်နှာနဲ့ ပြည်တွင်းနဲ့ ပြည်ပကို ခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန်သွားပြီး ဖြုန်း တီးနေကြတာ။
တကယ်တော့ သူတို့ သုံးဖြုန်းနေတဲ့ငွေတွေဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ သယံဇာတတွေကို အဓမ္မအေးဓါးမြတိုက်ပြီး၊ တစ် ကိုယ်တော်မောင်ပိုင်စီးပြီးသိမ်းကျူံးဘုန်းထားတဲ့ငွေတွေဘဲ။ တိုင်းသူပြည်သားတွေမှာတော့ ငတ်ပြတ်ဆင်းရဲနေ ပြီးနုံခြာစုတ်ပြတ်နေသလောက်သူတို့တစ်တွေကတော့ ပြည်တွင်းမှာရော ပြည်ပမှာပါ အရွယ်နဲ့ မမျှအောင် သောက်စားမူးယစ်ပြီး ပျော်ပါးသုံးဖြုန်းနေကြတာ။ သူတို့အဖေဘုန်းရသမျှ၊ အခွင့်ထူးခံလို့ ရသမျှ ငွေတွေဟာ တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ ဂုတ်သွေးကို စုပ်ပြီး၊ တိုင်းပြညိရဲ့သဘာဝသယံဇာတတွေကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိဘဲလိုချင်သလိုယူ ပြည်ပကို ရောင်းချချင်သလိုရောင်းချပြီး ရလာတာမို့ပိုင်ဖြိုးတေဇတို့ ညီအစ်ကို အတွက် ကတော့ အရည်အချင်းမရှိဘဲ အဖေသူခိုးကြီးရဲ့အမွေတွေရနေတာ။ပြည်သူတွေအတွက်ကတော့ တစ်နေ့ လုပ် စာမှန်မှန်ရဖို့ မပြောနဲ့ထမင်းရည်တောင်ဝယ်သောက်နေရတဲ့ဘ၀၊ ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးဝါးမပြောနဲ့ဘာ ရောဂါခံစားရမှန်းတောင်မသိရလောက်အောင်ကျန်းမားရေးအသိတွေမပြည့်ဝရတဲ့ဘ၀၊ ပညာရေး ကိုကျောင်း မှာ သင်ဖို့ မပြောနဲ့အခြေခံ က ခ တောင် ဘာမှန်းမသိတဲ့ ကလေးတွေဘ၀၊ ၀တ်စရာ အပေါ်အောက် ပြည့် စုံဖို့ မပြောနဲ့ကိုယ်ပေါ်တင်ရုံလောက်လေး အ၀တ်အစုတ်အပြတ်လေးရှိရုံ ဘ၀နဲ့ နေထိုင် အ သက်ရှင်ဖို့အနိုင် နိုင်ဖြစ်နေတာ။ ဒီလို တိုင်းပြည်ရဲ့သယံဇာတတွေသာ တေဇတို့လက်ထဲမရောက်ဘဲ တိုင်းပြည်အတွက် အမှန်တကယ်လိုအပ်နေတဲ့ ကျန်းမာရေး ပညာရေး ဘ၀ဖူလုံရေးတို့ အတွက်သာ အသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင် ပြည် သူတွေအတွက် ဘယ်လောက်အကျိုးရှိလိုက်မလည်း။ သန်းရွှေက သမက်ကို ဘုံမြောက်၊ သမက်က သန်း ရွှေကို အာဏာမြဲဖို့ ထောက်ပံ့ပေးနဲ့အကျိုးစီးပွား အပြန်အလှန်ပြေလည်နေကြတော့ သန်းရွှေရဲ့ မြေးတွေနဲ့တေဇရဲ့သားတွေကလည်း လိုင်စင်ရသောင်းကျန်းသူတွေဖြစ်နေပြီး ဥပဒေရဲ့ အပေါ်ဘက်မှ သူတို့ လည်းရှိနေကြလေရဲ့ ။တေဇရဲ့ သားတွေသာ တစ်ချိန်မှာ တိုင်းပြည်ကို အာဏာနဲ့ကိုယ်ကျိူးရှာစီးပွားရေးအမွေဆက်ခံပြီး အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ပြည်သူတွေရဲ့ ရင်သွေး သားသမီးတွေဘ၀က သူတို့ ရဲ့ကျွန်အဆင့် ခိုင်းဖတ်ဘ၀ရောက် မှာမပြောနဲ့မထင်ရင် မထင်သလို ဇီဝန်ချုပ်ခံရမယ့်ဘ၀ရောက်သွားလိမ့်မယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့ပြည်သူပိုင် သယံ ဇာတတွေကို ကိုယ်ကျိုးစီးပွားလုပ်ပြီး မတရားချမ်းသာနေတဲ့ သန်းရွှေတို့တေဇတို့ ရဲ့ ဘုန်းလို့ ရသမျှငွေတွေနဲ သားသမီး တွေ ဘယ်လိုဖြုန်းတီးပြီး ပျက်စီးနေကြလည်းဆိုတာ၊ ဆင်းရဲငတ်ပြတ်နေတဲ့ ပြည်သူတွေ သိရလေ အောင် ဖေါ်ထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။နအဖခေါင်းဆောင်ကြီးသန်းရွှေရဲ့ အမျိုးအဆွေတွေနဲ့အခွင့်ထူး ခံလက်တစ် ဆုပ်စာကို ဒီလိုဘဲ အခွင့်အလမ်းဆက်ပေးနေရင်တော့၊ အနာဂတ်မှာကိုယ်ရဲ့ ရင်သွေးတွေသူတို့ လက်အောက် မှာ ဆက်လက်အအုပ်ချုပ်ခံနေရဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်ဘ၀ရောက်ကုန်မလဲဆိုတာသိကြရင်ဖြင့် မိဘ တွေ အနေနဲ့ဘာလုပ်သင့်သလဲဆိုတာ သဘောပေါက်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။
တေဇရဲ့ တိုင်းပြည်သယံဇာတတွေကိုဘုန်းရသမျှငွေဖြင့် ၀ယ်ပေးထားသောပိုင်ဖြိုးတေဇအတွက်ကား။
အကိုကြီး အဖအရာဆိုတဲ့ ထက်တေဇရဲ့ အကို ပိုင်ဖြိုးတေဇ။
မိန်းမပျိုများဖြင့် ပျော်ပါးနေသော အဖေတူသား ပိုင်ဖြိုးတေဇ။
သောက်စားရုံသာမကမူးယစ်ဆေးဝါးတွေပါသုံးစွဲကာပျက်စီးနေသော တေဇရဲ့ အဖေတူသားကြီး ပိုင်ဖြိုးတေဇ။
အမူးလွန်ပြီး အိပ်ပျော်တော့မည့် ဆန်ကုန်မြေလေး တေဇအမွေခံလေး ပိုင်ဖြိုးတေဇ။
Posted by Ko Niknayman at 12:07 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 12:01 AM Links to this post
တွေ့ ဆုံမှုဆိုတာ နဲ့တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဆိုတာတို့ ဟာ တခြားစီပဲ။
နအဖမီဒီယာတွေမှာ ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာသံဃာ့အရေးတော်ပုံကို ကြံဖန်လည်ဆယ် အပုပ်ချတိုက်ခိုက်နေကြ တယ်၊ ဒါ မဆန်းဘူးလို့ပြောနိုင်တယ်၊ သဲသဲမဲမဲပဲ၊ ဒါပေမဲ့ နွားပြာကြီးအောက်သွားမရှိတာကိုတော့ဘယ်လိုမှ ဖုံးမရဘူး၊ဟိုလူက ခေါင်းခေါက် မာန်လိုက်။ ဒီလူက ကျောသပ်ဆုံးမလိုက်။ သကာရည်လူးထားတာနဲ့လူးမထား တာပဲကွာတယ်။ တကမ္ဘာလုံးက ၀ိုင်းပြီးပညာပေး နေကြတာတွေကို မျက်ထောင့်နီကြီးနဲ့ ငုံ့ ခံနေရတယ်၊
နိုင်ငံတကာနယ်ပယ်မှာ ဒီနေ့ လောက် နိုင်ငံရေးအရ နအဖ ခံစစ်ရောက်တာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုနိုင်တယ်၊ သူ တို့ မောက်မောက် မာမာ မောင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ ပီညဲရိုးကို သွားဖြီးလေးနဲ့ပြန်ကြိုနေရပြီ၊ ဂမ်ဘာရီကိုလည်း တလ လောက်အတွင်း ထပ်လာတာကို လက်ခံနေရတယ်၊ နောက်ဆုံးပြည်တွင်းမှာလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အိမ်ပြင်ထုတ်လာရတယ်၊ ဒါတွေဟာ နအဖ စစ်အစိုးရအနေနဲ့သံဃာ့အရေးတော်ပုံနဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားကို အသိအမှတ်ပြု။ အလျှော့ပေးနေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာ မငြင်းနိုင်ဘူး၊
ဒါပေမဲ့- ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ခြေကျင်းတန်းလန်းနဲ့ရုံးထွက်ရတဲ့တရားခံလိုဖြစ်နေတယ်၊ ဗိုလ်အောင် ကြည် နဲ့ ထိုင်ကြတော့ ကင်မရာတွေတဖြတ်ဖြတ်။ လူတွေတရုန်းရန်းနဲ့ ၊ ဒါပေမဲ့ ဒါဟာတဒင်္ဂကိစ္စ။ ပြီးတာနဲ့ သူ့ ရဲ့တကိုယ်တော်အိမ်ချုပ်ဆီ ပြန်ဝင်သွားရတယ်၊ ထောင်ဝင်စာတွေ့ တာနဲ့မထူးလှဘူး၊ ရေးထားသည်ဖြစ်စေ။ ရေးမထားသည်ဖြစ်စေ၊ ထုတ်ပြောသည်ဖြစ်စေ။ ထုတ် မပြောသည်ဖြစ်စေ။ ငါတို့ စိတ်ကြိုက်မတွေ့ ရင်အပြင် လောကကို မထွက်ရဘူးဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုဟာ ဒီတွေ့ ဆုံမှုမှာ အထင်အရှား လွမ်းမိုးနေတယ်၊
တန်းတူရည်တူမရှိခြင်း။ လွတ်လပ်ပွင့်လင်းမှုမရှိခြင်း။ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းမကျခြင်း တို့ ဟာ ဒီတွေ့ ဆုံမှုရဲ့ သ င်္ကေတဖြစ်တယ်၊ မီဒီယာဖော်ပြမှု။ ၀ါဒဖြန့် မှုတို့ ဟာ ဒီတွေ့ ဆုံမှုရဲ့ပကာသနသာဖြစ်တယ်။
ဒါတွေအပြင် အင်မတန်သတိပြုသင့်တဲ့အချက်တချက်က ဒါဟာ တွေ့ ဆုံမှု သက်သက်သာဖြစ်တယ်ဆိုတာပဲ၊ တွေ ကဏ္ဍဆုံမှုဆိုတာနဲ့တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးခြင်းဆိုတာတို့ ဟာတခြားစီပဲ၊ တွေ့ ဆုံရုံသက်သက်နဲ့ တော့ဘာမှ ဖြစ် မလာဘူး၊ စကားပြောတယ်ဆိုတိုင်းလည်း ဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းတယ်လို့ပြောမရဘူး၊
နအဖဟာ ဗိုလ်ခင်ညွန့် လက်ထက်တုန်းကလုပ်သလို ဗိုလ်သန်းထွန်းနဲ့ လွဲထားတဲ့ဇာတ်မျိုး ပြန်ကလို့ ကတော့ ခွင့်မပြုနိုင်ဘူး။ အခုနအဖလုပ်နေပုံက အဲဒီအချိုးနဲ့နည်းနည်းတူနေတယ်၊ပြည်သူလူထုကြီးဟာသူတို့ လိမ်သမျှ အလိမ် မိနေတယ်လို့ထင်နေရင်တော့မှားပြီဘဲ။ လူတွေဟာစိတ်မရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းနေတာဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ ၊ အနှစ်နှစ်ဆယ်နီးပါး ၀ါးလာတာ ခါးမှန်းမသိပဲ ရှိပါ့မလား၊
နအဖမှာအဆိုးကြီးဆုံးချို့ ယွင်းချက်ဟာ မရိုးသားတာပဲ၊ မရိုးသားတော့မပွင့်လင်းနိုင်ဘူး၊မပွင့်လင်းတော့သူ များကမယုံဘူး၊ သူများဆိုတာလည်း နည်းတဲ့သူများမဟုတ်ဘူး၊ ပြည်တွင်းမှာ တပြည်လုံး။ ပြည်ပမှာနိုင်ငံအား လုံး၊ သူများမယုံလို့ ကတော့ အာဏာဆက်မယူနေသင့်တာအမှန်ပဲ။
နှစ်ဘက်ဆွေးနွေးကြတယ်ဆိုရာမှာ ဘယ်သူမဆို။ ဘယ်အချိန်မဆို ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်ရယ်လို့ရှိတာချည်းပဲ၊ ခြွင်းခွင်းချက်မရှိဘူး၊ ဒါမဆန်းဘူး၊ ဒါပေမဲ့အဲဒီရည်မှန်းချက်ဟာ ရိုးသားဖို့ လိုတယ်၊ အချိန်ဆွဲချင်လို့ ။ သူတို့အပေါ် ပြည်တွင်းပြည်ပက ဖိအားတွေလျော့ ကျစေချင်လို့ ဆိုတာမျိုးနဲ့ဆွေးနွေးတယ်ဆိုလို့ ကတော့ ဘာမှ ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး၊
မကောင်းတဲ့ အကျိုးဆက်ပဲ ဖြစ်မယ်၊ ဗိုလ်နေ၀င်းဟာ “ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ” ဆိုတာတွေ ခေါ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ခေါ်တဲ့ အခါတိုင်းဟာဝါဒ ဖြန့်ရေး သက်သက်။ ဟန်ဆောင် သက်သက် ဖြစ်ခဲ့လို့ဘယ်ဆွေးနွေးပွဲမှ မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး၊ ဒါတောင်ပြောစရာတခုရှိတယ်။ အဲဒါက ဗိုလ်နေ၀င်း က “ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲ” ခေါ်တယ် ဆိုရာ မှာ ကြိုတင်သတ်မှတ်ချက်ဘယ်တော့မှမထားဘူး၊ နအဖကျတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆွေးနွေးပွဲ မစမီ လက်နက်ချခိုင်းနေတယ်၊ စစ်အုပ်စုချင်းအတူတူ။ မရိုးသားတာချင်းအတူတူဘာလို့ဒီလိုကွာခြားနေတာ လဲ၊
ဗိုလ်နေ၀င်းအာဏာသိမ်းတာဟာ ပထစအစိုးရလက်ထဲကသိမ်းတာဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးအစိုးရလက်ထက်က အစဉ် အလာတွေ ကျန်နေသေးတယ်၊ ပုဂ္ဂလိကမီဒီယာတွေလည်းရှိနေသေးတယ်၊ ဒီတော့ထောက်ထားရတာ တွေ မနည်းဘူး၊ နအဖကျတော့ သူ့ ရှေ့ကအစဉ်အလာဆိုတာကိုက စစ်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့အစဉ်အလာဖြစ်နေ တယ်၊ ပြည်တွင်းမှာ လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာ ဆိုတာလည်း လုံးဝ မရှိတော့ဘူး။
နောက်ပြီး သိပ်အခရာကျတဲ့ ခြားနားချက်တခုက ဗိုလ်နေ၀င်းအာဏာသိမ်းစတုန်းက ဗိုလ်နေ၀င်းဟာ သူ့ တပ် ကိုပိုင်တယ်၊ ပြည်တွင်းပြည်ပမှာ သူ့ ကိုဆန့် ကျင်နေကြတဲ့ အင်အားဟာလည်း အခုလောက်မများဘူး၊ ဗိုလ်သန်းရွှေကျတော့ ချောင်ပိတ် မိနေသလိုဖြစ်နေတယ်၊ သူ့ တပ်ကလည်း သူ့ ကိုနည်းနည်းမှ ကြည်ညိုတာ မဟုတ်ဘူး၊ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ ရေနစ်သူကောက်ရိုးး မြှင်ကို လှမ်းဆွဲသလို လုပ်နေရတာဆိုတော့ နပိန်ကန် ကန်တော့တာပဲ၊
မြန်မာပြည်သူတွေဟာ လွတ်လပ်ရေးရပြီးကတည်းက အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို အာသာငမ်းငမ်း တောင့် တခဲ့ကြ တာကနေ့အထိဆိုရင် အနှစ် (၅၀) ကျော်သွားပြီ၊ ဒီကာလအတွင်း သေကြေသူတွေ။ ပျက်စီးသွားတဲ့ အိမ်ထောင်စုတွေ။ စည်းစိမ်ဥစ္စာ တွေ။ ဘယ်လိုရေတွက်လို့ မှ အမှန်မသိနိုင်တော့ဘူး၊
စစ်အုပ်စုဟာတဘက်က ဖြစ်နေပြီး တလျှောက်လုံးပဲ အင်မတန်တင်းမာတဲ့ သဘောထားကို ကိုင်စွဲထားခဲ့တယ်၊ လက်နက်ရှိရင် အရာရာကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်။ အရာရာကို စိုးမိုးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ငါမှ တပါးဝါဒကို ကျင့်သုံးနေတယ်။
နှစ်ပေါင်း (၅၀) ကျော်ကျင့်သုံးလို့ မှ မအောင်မြင်တဲ့။ အဆိုးတွေသာ ဆက်တိုက်ကြုံတွေ့ ရတဲ့။ တိုင်းပြည်ကိုပြာ ပုံထဲ ဆွဲပို့ တဲ့ဝါဒ ဟာမှားကြောင်းမသိလောက်အောက် ဗိုလ်သန်းရွှေတို့အသိခေါက်ခက် အ၀င်နက်ရ သ လား၊ ဗိုလ်နေ၀င်းကတော့ အသက် (၇၀) ကျော်တဲ့အခါမှာ မအောင်မြင်မှန်းသိလို့ သူ့ ဖာသာပလ္လင်ပေါ်က ဆင်းချသွားတယ်၊ ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့အာဏာ တဏှာ ဟာ ပိုဆိုးတယ်လို့ပြောရတော့မယ်၊
ရေးသားသူ - ဗသြ
Posted by Ko Niknayman at 11:44 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 10:07 PM Links to this post
ဦးထိပ်ပေါ်တင်ပြီး ပန်ဆင်ထားဖို့အမျိုးသမီးထုရဲ့ထာဝရလက်ဆောင်။
နအဖခေါင်းဆောင်ကြီး သန်းရွှေအတွက် ဒီဘ၀မှာတင်မဟုတ်ဖူး ရောက်လေရာဘ၀ဆိုးတိုင်းမှာ ဦးထိပ်ပေါ် တင်ပြီး ပန်ဆင်ထားဖို့အမျိုးသမီးထုက ထာဝရလက်ဆောင်ပါတဲ့ဗျား။
ပခုက္ကူမှာ သံဃာတော်တွေ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြခဲ့တာကို နအဖဘက်က မိုက်ရိုင်းစွာတုန့် ပြန်ခဲ့တဲ့သံဃာ တွေကိုရိုက်နှက်တာ၊ ကြိုးကွင်းနဲ့ ပစ်ဖမ်းတာ၊ ဓါတ်တိုင်မှာ ကြိုးနဲ့ ချီပြီး သေနတ်ဒင်နဲ့ ထုပြီးစော်ကားခဲ့ရုံမက၊ ပြည်သူ လူထုအတွက် ပြည်သူလူထုရှေ့ ကနေ ရဲရဲဝန့် ဝန့်ရပ်တည် ချီဆက်ခဲ့ကြတဲ့ ရာနဲ့ ထောင်နဲ့ ချီရှိတဲ့သံဃာတော်အစစ်အမှန်တွေကို ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခဲ့ရုံသာမက၊ ညဘက်မှာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေကို အတင်းအဓမ္မ လက်နက်အင်အားနဲ့ ဝင်စီး၊ သံဃာတော်တွေကို အမဲဖမ်းသလို သဲသဲမဲမဲ ရိုက်ပုတ်ဖမ်းဆီး၊ ဘုရားဆင်းတုတော်တွေကိုပါ ခေါင်းဖြတ်၊ ကျောင်းနံရံမျက်နှာကျက်ကို စစ်ဖိနပ်နဲ့ ကန်ကျောက်ရုံမက၊ နောက်ဆုံး အပါယ်ငရဲကတောင် လက်မခံဘဲ အ၀ိဇီကို ဇောက်ထိုးကျစေမယ့် ယုတ်မာပက်စက်တဲ့ လုပ်ကြံဖန်တီးမှုတွေလုပ်ပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေမှာ မိန်းကလေးအသုံးအဆောင်တွေ တွေ့ ပါတယ်ဆိုပြီး အဆင်သင့်ယူလာတာလေးတွေ ထုတ်ပြပြီး စွပ်စွဲခဲ့တာကတော့ အင်မတန် ယုတ်မာ လွန်းလှပါတယ်။
တကယ်တန်းကြတော့ သူများသားမယားကို ကြာခိုနေကြတဲ့ ၊ အမျိုးသမီးတွေကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း မုဒိန်း ကျင့်နေကြတဲ့ သန်းရွှေ၊ ဗိုလ်ချူပ်တွေနဲ့စစ်အုပ်စုဟာ အခြေခံကျတဲ့(၅)ပါးသီလကို ဖေါက်ပြန်ပြီး ပြစ်မှုကျူး လွန်နေကြတာပါ။
ဒီ့အတွက် နအဖရဲ့ ခေါင်းဆောင် သန်းရွှေဟာ တာဝန်အရှိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သန်းရွှေနဲ့ နအဖ အပေါင်းအပါကို တုန့် ပြန်တဲ့ အနေနဲ့Panty Campaign ကို အမျိုးသမီးတွေ စတင်ခဲ့ကြပါတယ်။
မြန်မာ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအရ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေဟာ သားကိုသခင် လင်ကိုဘုရားလို့ တောင် အမျိုးသား တွေအပေါ်မှာ ရိုသေလေးစားစွာနဲ့ယဉ်ကျေးစွာဆက်ဆံလေ့ ရှိပါတယ်။ အဆုံးစွန်ဆုံး အမျိုးသမီး အသုံးအ ဆောင် အ၀တ်အစားတွေ လျှော်တာတောင် အမျိုးသားတွေအ၀တ်အစားနဲ့မရောဘဲ ခွဲခြားလျှော်လေ့ ရှိကြ ပါတယ်။ ဒီလို အင်မတန်သိမ်မွေ့ ယဉ်ကျေးတဲ့အမျိုးသမီးတွေဟာ ရဟန်းသံဃာတွေအပေါ်မှာ အမျိုးသမီး အသုံးအဆောင်တွေနဲ့ လုပ်ကြံဖန်တီးစွပ်စွဲခဲ့တဲ့ နအဖအပေါ်မှာ ပြန်လည်တုန့် ပြန်ဒဏ်ခတ်မှရတော့မယ်ဆိုတဲ့ အသိတရားဟာ ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ နအဖဟာ အမျိုးသားယေင်္ကျားကောင်းတစ်ဦးရှိသင့်တဲ့ လေးစားထိုက် တဲ့ သိက္ခာတရားမပြောနဲ့လူသားတစ်ဦးရှိသင့်တဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားတောင် လုံးဝမရှိတော့တဲ့အတွက် နအဖနဲ့ အထိုက်တန်ဆုံးဟာ မြန်မာရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအရ အမျိုးသားတွေအတွက် မသင့်တော်ဘူးလို့ ယူဆထားတဲ့ အ မျိုးသမီးအသုံးအဆောင်တွေကို သန်းရွှေဦးဆောင်တဲ့ နအဖတွေအတွက် အထူးသတ်မှတ်ပေးလိုက်တာပါ။
နောက်တစ်ချက်ကတော့နအဖဟာ သူရဲ့ ဘိုးဘွားပထွေးတွေဖြစ်တဲ့ မဆလခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ လက်သပ် သင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း အောက်လမ်းနည်းတွေကို ယုံကြည်လွန်းပြီး၊ တိုင်းပြည်ကို လက်နက်နဲ့ အဓမ္မ အုပ်ချုပ် နေတာ တောင်အရည်အချင်းမဲ့စွာနဲ့ ၊ ဘိုးတော်ဘွားတော်ဆိုပြီးကပ်ပေါင်းပြီး မြက်မြက်ကလေးစားနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရူး တွေ ရဲ့တစ်လွဲအကြံပေးချက်တွေကို အဟုတ်မှတ်ပြီး လိုက်နာကျင့်ကြံနေတဲ့အတိုင်း ယတြာခြေကာ ဘုန်းတန်ခိုး တိုးတက်စေဖို့လုပ်နေတဲ့ အယူသည်းမှုတွေအတွက် အမျိုးသမီး အသုံးအဆောင်တွေကို အထူးလက်ဆောင် ပေးပို့ လိုက်ကြပါတယ်။
နအဖခေါင်းဆောင်ကြီး သန်းရွှေအတွက် ဒီဘ၀မှာတင်မဟုတ်ဖူး ရောက်လေရာဘ၀ဆိုးတိုင်းမှာ ဦးထိပ်ပေါ် တင်ပြီး ပန်ဆင်ထားဖို့အမျိုးသမီးထုက ထာဝရလက်ဆောင်ပါတဲ့။
Posted by Ko Niknayman at 9:54 PM Links to this post
နအဖခေါင်းဆောင်သန်းရွှေရဲ့ သားမက် တေဇရဲ့ သား ထက်တေဇဆိုတဲ့ ချာတိတ်ဟာ မိမိကိုကိုယ် ဘ၀င်လေ ဟပ်ပြီး အဆင့်မရှိတဲ့စကားတွေပြောတာကြားရတော့၊ ပျက်စီးနေတာတွေတွေ့ ရတော့ အာဏာရူး စီးပွား ရေး လောဘသမားတွေရဲ့သားသမီးအသိုင်းအ၀ိုင်းကလို့ မပြောရဘူး၊ မိမိတင်မက တစ်ဆွေတစ်မျိုးလုံးရဲ့ မ ကောင်းတဲ့ဂုဏ်ယုတ်ကိုပါ ဖေါ် ပြနေတဲ့ မသူတော်ဖြစ်နေလေရဲ့ ။
အာဏာရူးသန်းရွှေရဲ့ကိုယ့်အမျိုးကိုယ်သာချစ်တဲ့ မျိုးချစ်စိတ်ယုတ်နဲ့သမီး ကိုပါပေးထားလို့တော်နေရတဲ့သူ ခိုး သမက် ကြီး တေဇတစ်ယောက် တိုင်းပြည်ရဲ့သယံဇာတတွေကို ဘုန်းချင်သလို ဘုန်းပြီး၊ တိုင်းပြည်တစ်ခု လုံး မွဲပြာကျနေပေမဲ့ သူသာလျှင် အချမ်းသာဆုံး လုပ်နေတဲ့ မသမာသောစီးပွားရေး လုပ်ငန်းတွေကြောင့် ရနေ တဲ့ ပိုက်ဆံငွေတွေကို သားဖြစ်သူ ထက်တေဇက အဖေကသူခိုး သားကလူဆိုး ဆိုတာလို ပျက်စီးချင်တိုင်းပျက် စီး နေတာကို တွေ့ ရလေရဲ့ ။
ထက်တေဇဟာ သူ့ ရဲ့ အဖေ တေဇက ရိုးရိုးသားသား သမာအာဇီဝနဲ့ များရှာလို့ချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်များထင် နေလားမသိ။ ဒါမှမဟုတ် အဖေလိုဘဲ စာရိတ္တပျက်ပြားဖို့အတွက် အပျော်ကြီးဖို့ ဘဲ သိတဲ့ လေလွင့်ပျက်စီးသူ လူငယ်တစ်ယောက်အဖြစ် အဖေဘုန်းရသမျှ ငွေတွေကို သုံးဖြုန်းနေလေရဲ့ ။
ဒီလို လေလွင့်လူငယ်တစ်ယောက်၊ မိမိကိုယ်ကို ဘာကောင်မှန်းမသိတဲ့သူ တစ်ယောက်ကဖြုတ်ဦးနှောက် လောက် လေးနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားဥာဏ်မရှိဘဲ ရဟန်းပြည်သူတွေ မိမိတို့ ရဲ့ဆန္ဒအစစ်အမှန်ကို ငြိမ်းချမ်းစွာနဲ့ လမ်းပေါ်ထွက် ဖေါ်ထုတ်ပြသာတာကိုဘဲ သူ့ အနေနဲ့ က အရူးတွေလုပ်တာလို့ ထင်ကြောင်းရေးထား တာက တော့ သူရဲ့ မျိုးယုတ်ဂုဏ်ကို ထိန်းသိမ်းပြလိုက်တာ ဖြစ်လေရဲ့ ။
တိုင်းပြည်ကို လက်နက်နဲ့ အုပ်ချူပ်နေတဲ့ လူသတ်သမား သန်းရွှေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့သယံဇာတမှန်သမျှကို သိမ်း ကြုံးခိုးယူပြီး မသမာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေတဲ့ လောဘသမားတေဇရဲ့ တို့ ရဲ့မျိုးစဉ်ဆက်လေး တစ် ယောက်က အနူပါးစပ်နဲ့လူတတ်လုပ်ပြီး ရဟန်းပြည်သူကို ထပ်စော်ကားပြလိုက်လေရဲ့ ။
တိုင်းပြည်ရဲ့GDP ပေါ်မှာ သုံးဖြန်းနေကြောင်း၊ တိုင်းပြည်ပိုင် ကျွန်းသစ်တွေ ရတနာတွေ သဘာဝဓါတ်ငွေ့ တွေကို စင်ကာပူ၊ တရုတ်နဲ့ရုရှတို့ ကို ရောင်းတုတ်နေကြောင်းကို ထုတ်ဖေါ် ရေးသားပြနေတော့ လူကြီး မိဘတွေ ညာသမျှ ရှေ့ ကဖုံးသမျှ သားမိုက်ငတုံးက နောက်ကဖေါ်ဆိုတာလိုလုပ်နေလေရဲ့ ၊ ၀န်ခံပြနေလေရဲ့ ။
ဒီလို ရူးတူး မူးမိုက်နေတဲ့ ထက်တေဇနဲ့ သူ့ အကို ပိုင်ဖြိုးတေဇတို့ ဟာ အချောင်ဝင်လို့ရနေတဲ့စင်ကာ ပူလိုနိုင်ငံမှာ သွားရောက်ပြီး ပျက်စီးချင်တိုင်းပျက်စီးနေတာဟာ နအဖပြောနေတဲ့ တစ်မျိုးသားလုံး အကျင့် စာရိတ္တ မြင့်မားရေးဆိုတာဟာနဲ့လွဲနေပါလား။ တကယ်တမ်း ကြတော့ သူတို့နအဖမိသားစုအသိုင်းအ၀ိုင်း တစ်မျိုးလုံး အကျင့်စာရိတ္တပျက်ပြားနေတာကို အဖတ်ဆယ်မရတော့တာမို့ဖြစ်သင့်တာကတော့ “နအဖတစ်မျိုးလုံး အကျင့်စာရိတ္တမြင့်မားရေး”ပါ။ ပြည်သူတွေက အကျင့်စာရိတ္တမပျက်ကြပါဖူး။ ဘုရားကို ဘုရားမှန်းသိပါတယ်။ တရားကို တရားမှန်းသိပါတယ်။ သံဃာကို သံဃာမှန်းသိပါတယ်။ သမာအာဇီဝကို သိကြ ပါတယ်။ (၅) ပါးသီးလ ကို သိကြပါတယ်။ ဒါတွေကို မသိကြဘဲ ဖောက်ပြန်နေတဲ့အကျင့်စာရိတ္တမှာ ဆိုးသွမ်း သောင်း ကျန်းနေသူ တွေကတော့ ထက်တေဇ တို့ လို လူမမယ်ချာတိတ်ကနေ တေဇ သန်းရွှေလို လူကြီးသူခိုး တွေ အထိပါတဲ့ နအဖ အသိုင်း အ၀ိုင်း တစ်ခုလုံးဖြစ်လေရဲ့ ။
နောက်ထပ်ထက်တေဇ ပြောထားတာကတော့ မကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေနဲ့ သူတို့ ပျော်ပါးနေကြောင်းကိုဝန် ခံဖေါ်ပြထားတော့ တိုင်းပြည်ထဲကို ရောဂါဆိုးတွေ သယ်လာသူတွေဟာ သူတို့ ဘဲဖြစ်ကြောင်း သိသာစေလေ ရဲ့ ။
သနားစရာကောင်းတာကတော့ အဲယားပုဂံကြီး ပိတ်လိုက်ရတာကို သူ့ ခမျာ အပျော်အပါးမက်ပြီး မသိလိုက်ရှာ ဘူးထင်ပါရဲ့ ။ တော်ကြာ အရေးအကြောင်းဆိုရင် ပြေးစရာမြေမရှိ သွားစရာနေရာမရှိဘဲ လမ်းပေါ်လွင့်ပြီး (လမ်းပေါ်ကခွေးတောင် မျက်စိနောက်ပြီးကိုက်မှဖြင့်) ရောက်နေရင်ဖြင့် စင်ကာပူက မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဝိုင်း သမခံနေရဦးမယ်။
သတိပေးချင်တာကတော့ ထက်တေဇလို လူမလေးခွေးမခန့် ကောင်လေးမပြောနဲ့သူ့ ရဲ့ အမျိုးအာဏာရူးသန်း ရွှေနဲ့လောဘသမားတေဇတို့ လည်း ကမ္ဘာပြည်သူ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းကို ခံရမှာမို့အစွယ် အပွားလေးတွေလည်း ပုန်းစရာနေရာရှိမှာ မဟုတ်ဖူးဆိုတာပါ။ သိပ်ပြီးတော့ လေလုံးထွားပြီး အသံကောင်း ဟစ်ပြီးမနေဖို့ နဲ့ ။ လူကြီးတွေအလှည့်မရောက်သေးဘဲ ကိုယ်အလှည့်အရင်ဖြစ်သွားဦးမယ်။ ရဟန်း ပြည်သူတွေကို မစော်ကားဘဲ ပါးစပ်ပိတ်ပြီး ကိုယ့်ဖာသာ တိတ်တိတ် အပျော်မက်နေချင် မက်နေပါလို့ ။ ။
သောက်စားပျော်ပါးကာ ပျက်စီးနေသော နအဖအသိုင်းအ၀ိုင်းမှ ထက်တေဇ။
Posted by Ko Niknayman at 9:42 PM Links to this post
၂၄.၁၀.၀၇ ည ၈နာရီ မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားနှင့် မြ၀တီရုပ်သံတို့မှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော သာသနာရေးဝန်ကြီး သူရမြင့်မောင် (နံဘေးမှ အကြံပေး ရဟန်းလူထွက် သာသနာဖျက် အံ့မောင်)နှင့် အပေါင်းပါတို့၏ အင်းစိန် ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တတိလောကာဘိဝံသ အပါအ၀င် ဆရာတော်ကြီး ၁၃-ပါးတို့မျက်မှောက်၌ ဖတ်ပြခဲ့သော ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းလှသည့် (ထောင်ထွက်ကဲ့သို့သော)စကားလုံးများ ပါဝင်သည့် ထုတ်လွှင့်မှုအပေါ် သံဃာ တစ်ရပ်လုံးမှ အယုံအကြည်မရှိ ရှုတ်ချခြင်းနှင့်အတူ ယင်းသို့ ရေးသား ဖတ်ပြမှုများသည် သာသနာတော်အား စော်ကားခြင်းနှင့် သံဃာထုတစ်ရပ်လုံးအား စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်သာ ဖြစ်ကြောင်း တုန့်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါရစေ။
ပီနန်ဆရာတော်ဟု ထင်ရှားသည့် ဆရာတော် ဦးပညာဝံသ နှင့် မစိုးရိမ်တိုက်၌ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ စာပေ ပို့ချခဲ့ပြီး သာသနာတော်အတွက် ကျေးဇူးများလှသော ဆရာတော် ဦးကောဝိဒတို့အား သံဃာအတုအယောင် ဟုစွပ်စွဲခြင်း၊ ဆရာတော် ဦးကောဝိဒအား ထောင်ကျခဲ့ဘူးသူ (ထောင်ထွက်)ဟု ပြောဆိုခြင်းမှာ အလွန်ပင် ရိုင်းပျလှပါသည်။ ထို့အပြင်ရှေ့မှောက်၌ ငုတ်တုတ်ထိုင်နေသော အင်းစိန်ဆရာတော်အားလည်း (အရှင် ဘုရား လည်း ခေါ်ယင်လာ၊ မလာရင် ဒီလိုပဲ အပြောခံရမယ်လို့) ပရိယာယ်နဲ့ စော်ကားခြိမ်းခြောက်လိုက်ခြင်း သာဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပျံလွန်သွားပြီးဖြစ်တဲ့ တိပိဋကဓရအရှင်သုမင်္ဂလာ၊ ယခုလက်ရှိ မစိုးရိမ် တိုက်သစ်ဆရာတော် အရှင်ရာဇဓမ္မာဘိဝံသတို့နဲ့အတူ အင်းစိန်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင် ထောင်ချခံခဲ့ရဘူး လို့ပါပဲ။ ဒါ့အပြင် ဆရာတော်ဦးပညာဝံသ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ သန္တိသုခ ကျောင်းတော်ကြီးကို မတရားသိမ်း ပိုက် ခဲ့တာ ဘယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းလဲဆိုတာ တစ်သာသနာလုံးက သိပြီးသားပါ။ လက်ရှိအစိုးရကို ဆန့်ကျင်တဲ့စာ ရွက်စာတမ်းတွေ တွေ့ရှိလို့အရေးယူကြစတမ်းဆိုရင် သာသနာပိုင်အဆောက်အဦအတွင်း ရှိစာအုပ်စာတမ်း (ပိဋကတ်တော်)များသာမက ပြည်သူပိုင်စာအုပ်များနှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ စာအုပ်စာတမ်းများကို မီးရှို့ဖျက်ဆီး လိုက်ရုံသာရှိပါတော့တယ်။ အကြောင်းကတော့ စစ်အစိုးရဆိုတာ သာသနာဖျက်အဖွဲ့ဖြစ်ရုံမျှမက ပြည်သူ တစ် ရပ်လုံး တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
၂လုံးထီ ၃လုံးထီဆိုတာ ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့လုပ်ရပ်တွေပါဆိုရင် လက်ရှိဘယ်သူတွေ အုပ်ချုပ်နေပြီး ဘယ်လိုအ ရေးယူနေလို့ ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာရော စဉ်းစားကြည့်စမ်း ပါဦးလေ။
စစ်မှန်တဲ့ ဥပဒေဆိုတာ တစ်ချိန်ချိန်မှာ ပေါ်ပေါက်လာမှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲပါပဲ။ အဲဒီအချိန်ကျရင် ယခု ကြေငြာဖတ်ပြခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ ပတ်သက်မှုမှန်သမျှ တာဝန်ရှိတဲ့ သာသနာရေး ၀န်ကြီးနဲ့အကြံ ပေးဦးအံ့မောင်တို့ ဖြေရှင်းနိုင်ဘို့တော့ ကြိုတင်စဉ်းစားထားစေချင်ပါတယ်။ (သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေကြဦးမယ် ဆိုရင်ပေါ့)။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ထေရ၀ါဒ တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် အရှင်နန္ဒ မာလာဘိဝံသ၊ သီတဂူဆရာ တော် အရှင်ဉာဏိဿရနဲ့ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ဆရာတော်၊ မြတောင်ကျောင်းတိုက် ဆရာတော်၊ မဟာဂန္ဓာရုံ (အမရပူရ) ဆရာတော် တို့ကိုလည်း လမ်းပေါ်ထွက်တာ သံဃာအတုအယောင်တွေသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ စာရွက် စာတမ်းတွေကို လက်မှတ်ထိုးခိုင်း၊ မရရင် ထုံးစံအတိုင်းလုပ်ဘို့ လမ်းညွှန်မှုပေးခဲ့တာ လက်မှတ်ထိုးခိုင်း လို့လည်း မရတော့၊ ထုံးစံအတိုင်းလုပ်ဘို့ လမ်းစရှာနေပြီဆိုတာပါ တစ်သာသနာလုံးကသိနေပါပြီ။ (လက်မှတ် ထိုးခိုင်းတာ ဆရာတော်ကြီးများက ငြင်းဆိုလိုက်တာ ဟုတ်မဟုတ် ဆရာတော်ကြီးများ အသိဆုံးပါ)။
နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်တိုင်း လုပ်နေရတာဟာ ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ ဆိုတာကတော့ ပညာရှိ ရဟန်းရှင် လူများထက် လယ်ထွန်သမား လှည်းမောင်းသမားတွေက ပိုသိကြပါတယ်လို့ တုန့်ပြန်ယင်း...
(AOAB Blog http://www.aoab.blogspot.com/ မှ တစ်ဆင့်ပြန်လည်ဖေါ်ပြပါသည်)။
Posted by Ko Niknayman at 3:39 PM Links to this post
သြစတြေလျနိုင်ငံကလည်း နအဖအပေါ် ငွေကြေးပိတ်ဆို့ မှုနဲ့ အရေးယူ့ပြီ။
ဒီလို ငွေကြေးပိတ်ဆို့ မှု ခံရတဲ့နအဖနဲ့ အပေါင်းအပါများကတော့။
Posted by Ko Niknayman at 3:33 PM Links to this post
အဲယားပုဂံကြီး (Air Pagan) - Sanctions မိသွားလို့အပိတ်ခံလိုက်ရပါပြီ။
Posted by Ko Niknayman at 3:31 PM Links to this post
တကယ်လို့ မင်းဟာ စစ်သားကောင်းတယောက် ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ―
စစ်သားတယောက်ဟာ စစ်သားတယောက် သက်သက်မဟုတ်တော့ဘူး။
တကယ်လို့ ညီလေးဟာ မျိုးချစ်ရဲဘော်တဦး ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ―
ဒါမှမဟုတ် ပြည်သူတဦးလည်း ဖြစ်နိုင်တာပဲ။
တကယ်လို့ ငါ့ညီဟာ ဒီမိုကရေစီဘက်သား စစ်သည်တော်တပါး ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ―
စစ်သားတယောက်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်မှာ မင်းဟာ
ထို့အတူ သစ္စာဖောက်လည်း မဟုတ်ဘူးပေါ့။
တို့ လွတ်လပ်မှုအတွက် တိုက်ပွဲဝင်သူတွေ
တို့ ဒီမိုကရေစီ မြတ်နိုးသူတွေ
တို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ကြိုးပမ်းသူတွေ
တို့အားလုံး လက်ချင်းချိတ်ပြီး အစိုးရတရပ် ―
ပြည်သူ့အတွက် ပြည်သူက ရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့
ကဲ … ညီမောင် စစ်သည်အပေါင်းတို့
ပြည်သူတွေကို ကယ်တင်ကြလော့ ―
ပြည်သူတွေကို ချစ်ကြလော့ ―
ပြည်သူတွေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ကြပါလော့ ။
ရေးသားသီဖွဲ့ သူ - အောင်ဝေး (ခေတ္တ ပုန်းခိုကျင်း တနေရာ)
(စစ်သားဟောင်းကြီး တဦးရဲ့ သား)
Posted by Ko Niknayman at 3:29 PM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 3:27 PM Links to this post
အာဂန္တုရဟန်းသာမဏေများကို လက်မခံရဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကမတား မြစ်ပါဘူး။ လက်မှတ်ထိုးဆရာတော် ကြီးတွေ နအဖဘက်လိုက်နေတာ လွန်လွန်းတယ်။ သာသနာ့ အကျိုးထက် ဘုန်းကြီးဖြစ်နေပြီး ကိုယ်ကျိုးလိုက် နေပါလား။ သာသနာအကျိုးကို အဓိက မထမ်းဆောင်တဲ့ ဘုန်းကြီးဟာ ဘုန်းကြီး ပီသပါ့မလား။ သာသနာဖျက် မင်းဆိုးမင်းညစ်ကို ပံ့ပိုးအားပေးနေတာ သာသနာဖျက်ဘုန်းကြီးဆိုး ဘုန်းကြီးညစ်ဖြစ်နေပြီ။ ကိုယ်ရဲ့ ရဟန်း အပေါင်းကို ရိုက်နှက် ညဉ်းပမ်းသတ်ဖြတ်နေတာကိုအကာအကွယ်မပေးဘဲလစ်လျူရှု နေတဲ့ဆရာတော်တွေကို ပါတော်လှန်ကြ။
Posted by Ko Niknayman at 8:53 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 6:23 AM Links to this post
ဒီလိုစာမျိုးရရင် အကြောင်းမပြန်ပါနဲ့ ။ (ကိုယ်ရဲ့အီးမေးလ်ထဲကို ခိုးဝင်ဖို့ ဖြစ်ပါ တယ်) ။
Posted by Ko Niknayman at 6:19 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 6:17 AM Links to this post
အာဏာမက်မောသူကြီးအတွက် အမျိုးသမီးများက ပေးပို့ သော Panty Power
This is your chance to use your Panty Power to take away the power from the SPDC (military regime in Burma).
You can post, deliver or fling your panties at the closest Burmese Embassy any day from today. Send early, send often!
For more info on the campaign, see
Posted by Ko Niknayman at 6:11 AM Links to this post
Posted by Ko Niknayman at 6:10 AM Links to this post
သံဃာ့သွေး မြေကျခဲ့လေပြီ။ သမိုင်းခေတ်အဆက်ဆက်၌ သွေးမစွန်းခဲ့သော သံဃာ့သွေးတို့သည် ဘုရားနယ်မြေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းပရ၀ုဏ် ကဲ့သို့သော သာသနာ့နယ်မြေ အတွင်း၌ပင်လျှင် စစ်ဘီလူးတို့၏ မိစ္ဆာတပ်ဖွဲ့များ၏ အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းမှုများကြောင့် သွေးစွန်းခဲ့ရလေပြီ။ စစ်ဘီလူးတို့သည် ၄င်းတို့၏ အာဏာတည်မြဲရေး အတွက် ကမ္ဘာ့သမိုင်း အစဉ်အလာ အကြီးမားဆုံးနှင့် ရှေးအကျဆုံး ကိုးကွယ်ရာဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာ၏ ရေရှည်တည်တံ့ရေးကို အကြံပက်စက်စွာ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်နေကြပြီ။ ဗမာလူမျိုးတို့သည် အမျိုးဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ထိန်းသိမ်း ကာကွယ်ခဲ့သည်မှာ သမိုင်းခေတ် အဆက်ဆက်မှ ယနေ့တိုင်ပင် ဖြစ်သည်။ သာသနာဖျက်ဆီးသူ မှန်သမျှ ကိုလည်း လက်တွဲ ညီညီဖြင့် စုပေါင်းတွန်းလှန်၍ အောင်ပွဲရသည်အထိ စွမ်းဆောင်ခဲ့ကြ သည်မှာလည်း အထင် အရှား ပင်ဖြစ်သည်။
ယခုအခါတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သာသနာ ရေရှည်တည်တံ့ရေး အတွက် ဆိုးဝါးသော ဖျက်ဆီးမှုများကို ကြုံတွေ့နေရပြီ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ပြည်သူပြည်သားများက စုပေါင်း၍ မတွန်းလှန်နိုင်ခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံ၌ ဗုဒ္ဓသာသနာ ကွယ်ပျောက်သည်အထိ အဖြစ်ဆိုးများကို ကြုံတွေ့ရနိုင်ပေလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံအတွင်း၌ သာသနာဖျက်ဆီးသူတို့၏ အန္တရာယ်ကို အမြစ်ပြတ် တွန်းလှန်ချေမှုန်း နိုင်မှု မရှိခဲ့လျှင် ကျွန်ုပ်တို့သည် သာသနာအပေါ်၌ တာဝန်မကျေသူ၊ သာသနာကို သစ္စာဖေါက်ဖျက်သူ၊ သာသနာ့ရန်သူများကို ရှင်သန်ခွင့်ပေးသူ များအဖြစ် သာသနာ့သမိုင်း တရားခံများ ဖြစ်သွားကြပေလိမ့်မည်။ အသက်သွေးချွေး စတေးခံကာ ပေးဆပ်ခဲ့ရသော ရဟန်းရှင်လူတို့၏ စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှု များကို ပြက်ရယ်ပြုသူ များ ဖြစ်သွား ကြပေလိမ့်မည်။
သမိုင်းအစဉ်အလာ ကြီးမားခဲ့သော ကျွန်ုပ်တို့၏ မလွှဲမသွေ ထမ်းဆောင်ရမည့် သမိုင်းပေးတာဝန်များထဲတွင် အပါအ၀င်ဖြစ်ပေသည်။ သာသနာတော် ဖျက်ဆီးသူများကို တွန်းလှန်ရာတွင် တစ်ပြည်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ဆောင်ရွက်ကြရမည်ဖြစ် သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် သာသနာဖျက် စစ်အာဏာရှင်များကို အမြစ်ပြတ်ချေမှုန်း၍ သာသနာကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကာ ကမ္ဘာတွင် မြန်မာ့သတ္တိကို လေးစားစံထားရသည် အထိ ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ကွက်ပဲ စုပေါင်း၍ တွန်းလှန်ရန်လိုအပ်ပေသည်။ သာသနာဖျက်တွေ ကျဆုံးစေရမည်။ ၄င်းကို ပံ့ပိုးပေးနေသော ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အစိုးရများ အားလုံးကိုလည်း သာသနာကို ကာကွယ်သောအားဖြင့် ဆန့်ကျင်တွန်းလှန်ရပေမည်။ သာသနာ အတွက် သွေးစည်းချိန်တန်ပြီ။ ဗမာ့သွေး ရဲတယ် ဆိုတာကို စစ်ဘီလူးတွေကို ပြဖို့ လိုအပ်လာပြီ ဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည်အနာဂတ်အတွက် အရေးကြီးချိန်မို့ သွေးစည်းကြစို့။
Posted by Ko Niknayman at 5:58 AM Links to this post
ဆုတ်လည်းဆူး စားလည်းရူး နံရံရှေ့ကစစ်ဘီလူး
တစ်စ တစ်စ မိုက်ရိုင်းကြမ်းကြုတ်ရာမှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေက အတော်လေးပီပြင် သရုပ်ပေါ်လာပါပြီ။ အပေါ်ယံငြင်သာပျော့ပျောင်းတဲ့ ပညာရှိလူမိုက်နည်းတော့ မဟုတ်ခဲ့ပါ။ ခွေးတစ်ကောင် ချောင်ပိတ်ရိုက်ခံနေရလို့ မဲမဲမြင်ရာ သိမ်းကြုံးလိုက်ကိုက်တဲ့နည်းပါ။ ဒီလိုပြောမိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က ရင်ထုမနာ ၀င်ပြော တတ်ပါတယ်၊ ခွေးတွေနဲ့တော့ မနှိုင်းလိုက်ပါနဲ့ “ခွေးတွေများ ကြားသွားရင် သူတို့ကိုယ်သူတို့ သတ်သေနေကြအုန်း မယ်” တဲ့၊ တော်တော် သနားစရာကောင်းသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ဖြစ်သွားပါသည်။ သူတို့ဘ၀ခမျာ အနှိုင်းခံစရာ ခွေးက တောင် နာရပါသတဲ့။
တိုင်းပြည်စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကို ဆွေမျိုးစုလိုက် ခိုးယူစားသုံး နေကြပြီး နောက်ဆုံးပေါ်ခေတ်မီပစ္စည်းတွေနဲ့တော့ ခင်ဗျားတို့ နေနိုင်ကြမှာပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျယ်ပြောလှတဲ့ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ခင်ဗျားတို့ ခြေလှမ်း ဘယ် လောက်များများ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လှမ်းနိုင်ကြလို့လည်း။ ပြည်သူကို ကာကွယ်ပေးနေပါတယ်ဆိုတဲ့ ခင် ဗျားကြီးတို့ ပြည်သူတွေကြားထဲ မှာ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးစွာ လျှောက်သွားရဲခဲ့လို့လား။ ခင်ဗျားတို့လမ်းထွက်လာလို့ ဘယ်ပြည်သူကများ အတင်းပွေ့ဖက် ကြိုဆိုဘူးပါသလဲ။ ခင်ဗျားတို့ သိပ်အားကိုး သိပ်ယုံကြည်တဲ့ တရုတ်တို့၊ အာဆီယံနိုင်ငံ တွေတို့ရဲ့ လမ်းမတွေ ပေါ်မှာပါ ခင်ဗျားတို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် လျှောက်သွားရဲလို့လား။ ခင်ဗျားတိုအတွက် ကမ္ဘာမြေဟာ သိပ်ကျဉ်းမြောင်းမနေဘူးလား၊ ခင်ဗျားတို့ဟာ ဆုတ်စရာမြေမရှိဖြစ်နေပါလား။ ထွက်ပြေးရအောင်လည်း ခင်ဗျားတို့နောက်မှာ ပြည်သူဆိုတဲ့ အုတ်တံတိုင်းကြီးက ကာထားပြီးသား၊ လက်လျှော့လိုက်ရအောင်လည်း ခင်ဗျားတို့နေရာ ၀င်လုဖို့စောင့်နေကြတဲ့ မျိုးဆက်သစ် ငရဲသားတွေက ခုတ်ထစ်ပစ်ခတ်ဖို့ စောင်နေကြပြီးသား၊ အဲဒီတော့ ဘာလုပ်စရာကျန်ပါသလဲ၊ ရသလောက် ကို ဆွေမျိုးစုအလိုက် ဆက်ခိုးနေရ၊ မျိုးဆက်သစ်ငရဲသားတွေကို ခြောက်လှန့်ဖို့အတွက် ပြည်သူတွေကို သတ်ပြရ၊ မတောက်တခေါက် သံတမန်ရေးရာနည်းလမ်း၊ ဂျိုကြိုး နားရွက်ပဲ့အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ ကမ္ဘာကို လိမ်ပြရ၊ အဖေခေါ်နေရတဲ့ တရုတ်လိုတိုင်းပြည်မျိုးကို ဗမာပြည်ရဲ့ သယံဇာတနဲ့ ဗမာ့မြေအစိတ်အပိုင်းတွေကို ထိုးကျွေးရနဲ့ ခင်ဗျားတို့ အတော် သနားစရာကောင်းတာပဲ။ ခ င်ဗျားတို့ပါးစပ်ကသာ “ ပြည်သူ့အာဏာကို ပြည်သူတွေကိုသာ အပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အသက်နဲ့ ဆွေမျိုးစည်းစိမ်လေးကိုတော့ဖြင့် ပုန်းစရာမြေနဲ့အတူ ပေးသနားကြပါ” လို့ ဘာကြောင့် ပြောမထွက်တာလဲ။ ပြည်သူက သင်ပုန်းချေဖို့ အသင့်ရှိနေပေမဲ့ ခင်ဗျားတို့ချင်း မစည်းလုံးနိုင်ဖြစ်ပြီး ခွေးသေကောင် လင်းတ အဆွဲခံရမှာ ကြောက်နေကြရတာ မဟုတ်လား။ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ သီးခြားဖြစ်စဉ်တွေကို မယုံကြည်ဘဲ နေနိုင်ပေမဲ့ ၀ဋ်ကိုတော့ ရှောင်လွှဲလို့ ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့အချင်းချင်း ခွက်စောင်း ခုတ် နေ ကြခြင်းဟာလည်း ၀ဋ်တစ်မျိုးပါပဲ။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ၀ဋ်ခံရခြင်း အကြောင်းအရင်းများ
ခင်ဗျားတို့ နှစ်ကာလကြာရှည်စွာ ၀ဋ်ခံရစေဖို့ ခင်ဗျားတို့ လုပ်ရပ်တွေကို ဆန်းစစ်ကြည့်ကြပါစို့…
ခေတ်အဆက်ဆက်ရှေ့ထွက်ရပ်တဲ့ အမာခံကျောင်းသားလူငယ်တွေကို သွေကွဲစေဖို့ မလိုအပ်တဲ့ ပြည်သူ့ ဘဏ္ဍာဖြုန်းတီးမှုကြီးအဖြစ် မြို့ပြင်၊ မြို့စွန်တွေမှာ တက္ကသိုလ်အသစ်တွေကို သွားတည်ခဲ့ကြတယ်။ ရှိရင်းစွဲ အထင်ကရ တက္ကသိုလ်ကြီးတွေမှာ အတုအယောင် ဆရာအတုတွေနဲ့ ဘွဲ့ကြီးတွေကို ထားခဲ့ကြတယ်။ အရည်အချင်း မရှိဘဲ ရခဲ့ကြတဲ့Master တွေ Ph.D တွေ ပေးနေလိုက်ကြတာ၊ ဒီလိုနဲ့ပဲ ခင်ဗျားတို့ ခေါင်းဆောင်ကြီး သမီး Ph.D ဘွဲ့ရသွား ခဲ့တယ်။ ဆရာကြီးဒေါက်တာ သန်းထွန်းက ပြောသွားခဲ့ဘူး တယ်။ တက္ကသိုလ်မှာ သုတေသနမရှိ၊ ကျမ်းပြုမရှိဘဲနဲ့ ဆရာတွေက နံရံဆေးသုတ်၊ ခြံစည်းရိုးခတ်နဲ့၊ ကျောင်းလုံခြုံရေးတွေသာ ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ Master အတွက်ကျမ်းပြု (copy) လုပ်ရာမှာလည်း အင်္ဂလိပ်စာကို ကိုယ်တိုင်မရေးနိုင်လို့ ပြင်ပစာတတ် ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများထံမှာ ငွေပေးရေးခိုင်းနေရ တာလည်း လူတိုင်း သိကြပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ရဲ့ ကျောင်းအုပ်ကြီးဆိုသူတွေဟာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သတင်းပေးသက်သက် လုပ်နေရပြီးကျောင်းတွေမှာလည်း နေသာတဲ့အချိန်မှာသာ ကျောင်းပေါက်ဝထိုင်ပြီး ကျောင်းသာကဒ်ချိတ်မချိတ်၊ အ၀တ်အစားဘယ်လိုဝတ်သလဲ၊ ဆိုတာလောက်လိုက်ကြည့် လူလုံးပြလူရာဝင်နေကြရတာပါ။ ခင်ဗျားတို့ မျိုးဆက် ဟောင်းဗိုလ်ချုပ်တွေဟာ ပညာတတ်ဆိုရင် အသည်းနာနေကြပြီး လူငယ်တွေ ပညာမတတ်၊ ပညာငတ်နေကြရအောင် လုပ်လိုကြခြင်းဟာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ကျောင်း သားထုကြီးအပေါ် လက်စားချေခြင်းတစ်မျိုးဆိုတာ နားလည်ထားပြီးသားပါ။
ကျောင်းသားတွေက “ဗိုလ်ချုပ်၆တန်း တစောက်ကန်း” လို့ ကြွေးကြော်ခဲ့ကြတော့ ခင်ဗျားတို့ အသဲအဖျား ခတ်ပြီပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ပညာတတ်မျိုးဆက်ကိုသတ်၊ ပညာရင်းမြစ်ကို ဖြတ်တောက်ပစ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတာ တကယ်ရော အောင်မြင်ခဲ့ပါရဲ့လား။ နိုင်ငံတကာက လှူဒါန်းတဲ့ စာအုပ်စာတန်းတွေကို လေဆိပ်မှာတင်ပဲ တပ်မတော် တက္ကသိုလ်တွေ ကိုပို့ခဲ့ကြတာ ကျောင်းသားတိုင်းအသိပါ။ ခေတ်မီတပ်မတော်ကြီး လို့ကြွေးကြော်ရအောင် တကယ်ရောခေတ်မီနေပါရဲ့ လား။ ပြင်ပစာပေ၊ မီဒီယာတွေနဲ့ မထိတွေ့စေတဲ့ ခင်ဗျားတို့ မျိုးဆက်တပ်မတော်ဟာ ဘယ်လိုများအဆင့်မြင့်ပညာတွေ ကို သင်ကြားတွေးခေါ်နိုင်မဲ့ ဦးနှောက်အကြည်ဓါတ် ရှိရှာမှာလည်း။ ပြင်ပရေဒီယို၊ စာအုပ်စာတမ်းတွေ နားထောင်ခဲ့၊ ဖတ်မိခဲ့ရင် ပင်စင်တောင်မရ တပ်ကနေ ထုတ်ပစ်ခံရတယ်ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ ပြောမပြလည်း သိနေကြပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ အင်အားနဲ့ယှဉ်ရင် လက်တစ်ဆုတ် သာသာ လောက်သာရှိတဲ့ ကေအန်ယူကို နှစ်ပေါင်းများစွာကြာတဲ့အထိ ခင်ဗျားတို့ ဘာကြောင့်အနိုင်မတိုက်နိုင်ပါသလဲ။ ခင်ဗျားတို့မှာ ခေတ်မီ စစ်ပညာ ရပ် အတတ်တွေမရှိဘဲ အင်အားသုံး ဖြိုခွဲ တတ်တာလောက်ပဲ ရှိတာကိုး။ ကေအန်ယူကို နိုင်အောင် မတိုက်နိုင်တဲ့အခါကြတော့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ နည်းရိုးကြီးဖြစ်တဲ့ မျိုးဆက်သုတ်သင်ရေး နည်းလမ်းနဲ့ပဲ အပြစ်မဲ့ ကရင်ပြည်သူတွေကို ချေမှုန်း သုတ်သင်တော့တာပါပဲ။ အောင်မြင် ပါရဲ့လား….။ ဗမာပြည်မြေပုံပေါ်မှာ ကရင်လူမျိုးလည်းပျောက်ပျက်မသွားသလို၊ တခြားမျိုးနွယ် တိုင်းရင်းသားတွေ လည်းပဲ ကျန်နေတုန်းပါ။ ခင်ဗျားတို့ချည်းပဲကျန်လို့ တကယ်ငြိမ်းချမ်းနိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့လွတ်နိုင်မယ်လို့ ထင်တဲ့ တစ်နေရာမှာပုန်းပြီး ခင်ဗျားတို့အရွယ်မရွေးကြောက်နေရတဲ့ ပြည်သူတွေကို အနုမြူဗုံး ကြဲပြီးသာ သတ်လိုက်ကြပေတော့။ ဒီလိုမှ မရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ရင်တော့ ……။
ယတြာအတတ်စူးလို့ ရူးရတော့မဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ
ထစ်ခနဲဆို ယတြာချေတတ်တဲ့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ယတြာတွေဟာလည်း ခင်ဗျားတို့လည်ပင်းကို စွပ်နေတဲ့ ကြိုးကွင်း ဖြစ်လို့နေပါလား။ စာချိုးတော်တဲ့ဗမာတွေဟာ “ကြက်ဆူဆီထွက်၊ စုကြည်တက်” လို့ ချိုးလိုက်ကြ တော့ ခင်ဗျားတို့ အတွက်တော့ အဖျားသွေးတက်ရပြီပေါ့။ ငွေတွေသောက်သောက်လဲ ကုန်ခဲ့တဲ့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ စီမံကိန်းကြက်ဆူပင်တွေ ဟာလည်း ဖရိုဖရဲဖြစ်လို့ ခွေးအုပ်တွေသာ သေးပန်းရာ ဖြစ်နေပါရော့လား။ အခု လည်း လာပြန်ပြီ “သားသုံးသား” တဲ့။ ခင်ဗျားတို့ဟာ ကိုယ့်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်းရာမှာတော့ တော်တော် အညိုအမည်းစွဲနေလောက်ပါပြီ။ သံဃာလှုပ်ရှားမှုမှာ သံဃာအစစ်က ၂%လောက်ပဲ ရှိပါသတဲ့။ သံဃာပင်လယ်ကြီး စီးဆင်းနေသလားအောက်မေ့ရလောက်အောင် ရန်ကုန်မြို့ လမ်းမတွေပေါ်မှာ နီရဲပြည့် လျှံနေတာ ခင်ဗျားတို့ကလွဲရင် တကမ္ဘာလုံးအမြင်ပါ။ မြေပေါ်မြေအောက် ခင်ဗျားတို့ ကြောက်နေရတာ ဗြဟ္မာမင်းနဲ့ငရဲမင်းပါပဲ။ နေ့လည်ကြောင်တောင် မိုခြိမ်းသံတွေ လူတိုင်းကြားလိုက်ရပါတယ်။ ခင်ဗျား တို့ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်ထောင်းချက်ကတော့ သံဃာတုတွေ ၀င်ရောက်နှစ်မြှုပ်လှုပ်ရှားကြသတဲ့။ တကယ် ဆိုရင်တောင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ လုံခြုံရေး အစီအမံ ညံ့ဖျင်းပါတယ် လို့ ၀န်ခံပြီးသား ဖြစ်နေရပြီ။ မသေမချင်း ရိုက်သတ်၊ ပစ်ခတ်၊ ဖမ်းဆီး ထောင်ထဲထည့် ပြီးတာတောင်၊ နိုင်ငံအနှံ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေမှာ လိုက်လံ ဖမ်းဆီး နေတာတောင် မကုန်နိုင်သေးအောင် များပြားနေပါရော့ လား။ တကယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ဝန်မခံလည်း လူတွေက သိထား သဘောပေါက်ကြပြီးသားပါ။ ကေအန်ယူအင်အား ယုတ်လျှော့သွားအောင် ဗုဒ္ဒဘာသာနဲ့ ခရစ်ယာန် နှစ်ခြမ်းကွဲအောင် လုပ်ခဲ့တာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့လက်ချက်၊ ကတုံးစနက်ဆို တာသိပြီးသားပါ။ ခင်ဗျား တို့ကို ယတြာချေပေး၊ လူတွေကို နှစ်လုံး၊ သုံးလုံး ဂဏန်းပေးပြီး Landcruiserစီး၊ without ကား တ၀ီဝီ နဲ့ ကတ္တီပါ သင်္ကန်းရုံနေကြတဲ့ ကတုံးတွေဟာလည်း ခင်ဗျားတို့ အသက်တစ်ရက်ရှည်ဖို့ ဆွဲဆန့်ပေးနေရတဲ့ ပုထုဇဉ် တွေသက်သက်ပါပဲ။
အခုတော့ ယတြာအတတ်စူးလို့ ခင်ဗျားတို့ပါ ပြေးပေါက်မှားရတော့မယ်။ “သားသုံးသား”တဲ့၊သက်သေဖျောက် ဖျက်ပစ်ဘို့ နောက်ဆုံးရှင်းလင်းရမှာက “စစ်သား” တဲ့။ ခင်ဗျားတို့တတွေဟာ စစ်သားတွေ မဟုတ်လို့ ဘာများပါလဲ။ အဓိကကြိုးကိုင် စီမံခဲ့တဲ့ ခင်ဗျားတို့တတွေဟာ အဓိကသက်သေမဟုတ်လို့လား။ မီးကြွင်းမီးကျန်လည်း မချန်နဲ့တဲ့၊ ခင်ဗျားတို့ချင်း နောက်ကျောမလုံဖြစ်နေရတာဟာ မီးကြွင်းမဟုတ်လို့ ဘာများပါလဲ။ စစ်သားလည်းမချန်နဲ့ တဲ့။ မကျန် အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက် စစ်သားဖြစ်နေရတဲ့ ခင်ဗျားတို့လည်း ဒီ“ယတြာ” မှာ အကျုံးဝင်သွားရတာပါ။ ပြည်သူကတော့ ငါတို့ကို အသနားခံရင် သက်သာ မဲ့ကိစ္စဟာ အခုတော့သူတို့ချင်း ယတြာအတတ်နဲ့ အသေသတ်ကြတော့မယ်ဆိုပြီး “၀ဋ်လည်ပွဲ” ကြီးကိုစောင့်ကြည့် နေကြပါပြီ။
သားသမီးကြောင့် လည်ရတဲ့ ၀ဋ်
စာဖတ်သူများအား အောက်ပါစကားလုံးများကို ရေးရတဲ့အတွက် ကန်တော့မိပါရဲ့။ ပြည်သူကြားက ဒေါသ ကြောင့် ပေါက်ဖွားလာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသမီးအတွက် ထောပနာစကားက “စိန်စီသော ဖာသည်မ” တဲ့။ ဗိုလ်ချုပ် ကြီးရေ ခင်ဗျားအတွက် ခင်ဗျားရဲ့ ချစ်သမီးရတနာက သောက်ရှက်ကို ခွဲတော့တာပါဘဲ။ မလှပတဲ့ ခင်ဗျားတို့ မျိုးရိုးရုပ်ကို ဖုံးနိုင်ဖို့ အတွက် စိန်ရတနာတွေနဲ့ ဖုံးအုပ်ခဲ့ပါတယ်။ စိန်ရတနာတွေလည်း မကာ ကွယ်နိုင်ခဲ့တာကတော့ ကြွားချင်လှတဲ့ ခင်ဗျားသမီးရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် ကင်မရာသမား တွေဟာ ကိုယ်လုံးပေါ်အောင် ရိုက်ရတဲ့အခါမှာ ဘယ်လိုမှ ဖုံးလို့မရအောင် စူထွက်နေတဲ့ ခင်ဗျားသမီးရဲ့ “ဗိုက်”အလှပါပဲ။ ဒီဗိုက်ထဲက မယူရသေးခင် ပူထွက်နေတဲ့ကလေးဟာ မချိပြုံး ပြုံးနေတဲ့ သတို့သားရဲ့ ကလေး မဟုတ်ဘူးးဆိုတာကို လူတိုင်း အသိပါ။ ခင်ဗျားရောသိပါလေစ။ ခင်ဗျားတို့ချင်း သုတ်သင်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်ချုပ် တင်ဦးရဲ့ မြေးလေးတဲ့။ ခင်ဗျားသမီး နိုင်ငံခြားရေးရုံးမှာ အတင်းကာရော ညွှန်ကြားရေးမှူး ရာထူးရယူပြီး ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း မိန်းမရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တင်ဦးသား နောက် လျှောက်လိုက်နေတယ် ဆိုတဲ့သတင်းကလည်း လူတိုင်းသိနေပြီးကြပြီ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ကိုယ့်ပေါင်ကိုလှန်ထောင်းချက်ကတော့ အံ့ပါရဲ့ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ ဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ သွေးဟာ ခင်ဗျားတို့ထံရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ။ ဒါဟာ ၀ဋ်လည်တာမဟုတ်ဘူး ကွ ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ လို့သာ ကြုံးအော်လိုက်ကြပါတော့။
ခင်ဗျားတို့ တရုတ်ကို အဖေခေါ်ပြီး ခင်ဗျားတို့ အသက်တွေကို ဆွဲဆန့်နေရတာဟာ နောက်ဆုံး ကျတော့လည်း တရုတ်ပြည်ကြီး စီးပွားဖြစ်အောင် ပေးဆပ်ရေးသက်သက်ပါဘဲလား။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ခေါင်း ကိုင်ဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း လက်ထက်က တရုတ်စီးပွားရေးတွေကို မတရားသိမ်းပြီး ပြည်သူနဲ့ ရန်တိုက် ပေးခဲ့တဲ့ ၀ဋ်တွေကို ခင်ဗျားတို့ လိုက်ပြီး ခံနေရတာပါ။
Media တိုက်ပွဲအတွင်းမှာ ကြီးအကျယ် ကျရှုံးရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တွေ
တိုက်ပွဲလို့သာ သုံးနှုန်းရတယ်၊ အခုလို မီဒီယာတိုက်ပွဲမှာ ခင်ဗျားတို့ဟာ ခုခံစရာမရှိ၊ အကာအကွယ်မရှိဘဲ ပြတ်ပြတ်သားသား အရှက်တကွဲ နဲ့ ရှုံးနိမ့်ရတာပါ။ လမ်းပေါ်ထွက်၊ ဘုရားစာဆိုနေတဲ့ သံဃာတွေကိုလည်း ခင် ဗျားတို့ ကြောက်လန့်တကြားဖြစ်ပြီး ပစ်ခတ်ရိုက်နှက် သတ်ပစ်နေတာတွေကို တကမ္ဘာလုံးက မြင်ကုန်ကြပါပြီ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ကြောက်ချက်ကတော့ အရွယ်မရွေး၊ ပုဂ္ဂိုလ်မရွေးပါဘဲ။ တိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂါတ် အညွန့်တလူလူ ဖြစ်နေတဲ့ ဆယ် ကျော်သက် တွေကိုလည်း ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီး ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်တွေချတယ်။ လမ်းပေါ် စီတန်းလမ်းလျှောက်နေလို့ဆိုပြီး ထောင်ဒဏ် ၇နှစ်ကနေ ၅၂နှစ် အထိအောင် ချပစ်နေတယ် ဆိုတာလည်း တကမ္ဘာလုံးက သိနေကြပါပြီ။
သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုလည်းကြောက်ပြီး ဖမ်းဆီးချင်တဲ့ သူတို့ရဲ့ သား၊ သမီး၊ မြေး၊ မြစ်တွေကို မမိလို့ရှိရင် ဓါးစာခံအဖြစ် အစားထိုးဖမ်းဆီးမှုတွေကိုလည်း သိကုန်ကြပါပြီ။ ခင်ဗျားတို့ ကတော်တွေက အိမ်မှာ ဖဲရိုက် ရတာ၊ အတင်းတုတ်ရတာ တွေမှာ ပျင်းလာရင် နောက်ထပ် အပျင်းပြေ အိုက်တင်ထုတ်စရာအဖြစ် အမျိုး သမီး အဖွဲ့တွေ ဖွဲ့ပြီး ဟန်ရေးပြခဲ့ကြတယ်။ အခု ဒီအရေးတော်ပုံကြီးမှာ အရွယ်သုံးပါးမရွေးတဲ့ အမျိုးသမီးထုဟာ ရဲဝံ့ စွာ လမ်းမပေါ် ချီတက် ခဲ့ကြတယ်။ ဒါကိုလည်း လက်နက်ကိုင် ထားတဲ့ ခင်ဗျားတို့က အမျိုးသမီးထုကြီးကို ကြောက်ပြီးရိုက်နှက်၊ ဖမ်းဆီး ကြပြန်ပါတယ်။ အဖမ်းခံရတဲ့ မိခင်တွေနဲ့ နို့စို့အရွယ်၊ လူမမယ်အရွယ် ခလေး ငယ်တွေဟာလည်းတကွဲတပြားစီဖြစ်နေ ကြရရှာတယ်။ ဒီကိစ္စတွေကို အကာအကွယ်ပေးဖို့နေနေသာသာ နှုတ်ခမ်း နီဆေးဆိုးမပျက်၊ ပိုး၊ဖဲသား အ၀တ်မပျက်တဲ့ ခင်ဗျားတို့ ကတော်ကြီးတွေက မသိချင်ယောင် ဆောင်နေတာ တကမ္ဘာလုံးက အသိပါ။
ထေရ၀ါဒ အဓွန့်အရှည်ဆုံး၊ အထွန်းကားဆုံးတိုင်းပြည်၊ အလှူရေစက် လက်နဲ့မကွာပါလို့ ကြွေးကြော်နေပြီး ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ရက်ရက်ရောရော လှူလိုက်တဲ့ နံပါတ်တုတ်၊ ၀ါးရင်းတုတ် ရိုက်ချက်တွေဗျာ၊ သံဃာတော်တွေမှာ အတုံးအရုံး ဖြစ်၊ သင်းပိုင်ကျွတ်နဲ့ ထွက်ပြေးနေရရှာတဲ့ ကိုယ်တော်ရဲ့ သင်္ဃန်းကိုဆောင့်ှဆွဲပြီး ပယ်ပယ်နယ်နယ်လှူနေတဲ့ ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ ဒုတ်ဒါနအလှူတွေကို တကမ္ဘာလုံးက အံ့သြထိတ်လန့်၊ တုန်လှုပ်ရအောင်လည်း မြင်ခဲ့ကြရပါပြီ။
ခင်ဗျားတို့ရဲ့ စစ်သား၊ စစ်ဖိနပ်တောင်စီးမထားတဲ့ ငမိုက်သားလေးက ဂျပန်သတင်းထောက်ကို အနီးကပ်ပစ် သတ်ခဲ့တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နှစ်စဉ် ခင်ဗျားတို့အိတ်ကပ်ထဲ ရောက်သွားနေကြ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အကူအညီတွေ ကို ဖြတ်တောက်ပစ်ခဲ့ပါပြီ။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဗမာလူမျိုးနဲ့ ဆင်နေလို့ လွဲမှားပစ်ခတ်မိတာပါလို့ ဆိုလိုက် ကြပြန်တော့ ဘာလက် နက်မှမရှိတဲ့ ဗမာပြည်က သံဃာတွေ၊ ပြည်သူတွေကို ဗမာလူမျိုး စစ်သားတွေကပဲ အ သေပစ်သတ်နေတာပါလို့ ၀န်ခံလိုက်ရပြန်ရောပေါ့။
ခုမီဒီယာတိုက်ပွဲမှာ ခင်ဗျားတို့အတွက် အံ့ကြိတ်ခုခံ၊ လိမ်ညာနေရတဲ့ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာ ၃စောင်နဲ့ ရုပ်သံလိုင်း တွေဟာလည်း ဗမာလူမျိုး သန်း၆၀ကျော်အပေါ် ဘာမှမထိရောက်နိုင်တော့သလို၊ ကမ္ဘာနဲ့လည်း ယှဉ်ဖို့ မလိုတော့ ပါဘူး။ ခင်ဗျားတို့ သတင်းစာစောင်ရေဟာ လူဦးရေနဲ့ယှဉ်ရင် ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်း လောက် များလွှမ်းမိုးထားနိုင်လို့လဲ။ ရုပ်သံလိုင်းတွေကတော့ တိုင်းပြည်ငွေဖြုန်းရုံသက်သက်ပါဘဲ။ လူတွေက နှစ်ပေစလောင်း၊ ရှစ်ပေစလောင်း၊ အင်တာနက်တွေအပေါ်မှာသာ အာရုံရှိကြတာပါ။
ခင်ဗျားတို့မရှုမလှ ရှုံးနိမ့်သွားတဲ့ ဒီမီဒီယာရှုံးနိမ့်မှုကြီး ကို ကြည့်ပြီး ပြည်သူတွေဟာ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ဆို တာကို နားလည်သဘောပေါက်သွားပါပြီ။ ဘယ်သူတစ်ဦး တစ်ယောက်ကမှ တိုက်တွန်းလှုံ့ဆော်စရာမလိုဘဲ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုမြင်ကွင်းတွေကို ကိုယ်ပိုင်အသိစိတ်ဓါတ်နဲ့ တကမ္ဘာလုံးသိအောင် ပို့ဆောင် ရင်ဖွင့်ဖြန့်ချပြနိုင်ခဲ့ ပါပြီ။
ခင်ဗျားတို့မှာတော့ “ကျွန်တော်ဟာ သတင်းစာ ဆောင်းပါးရှင် ဘယ်သူပါခင်ဗျာလို့” ရုပ်ရှေ့ထွက်မပြရဲတဲ့ lier shadow တွေဆီက ဆောင်းပါးတွေကို သတင်းစာတွေမှာအပြည့်တင်၊ ပြည်သူကမဖတ် မှန်းကလည်းအတတ်သိလေ တော့ ပြည်သူဖတ်တဲ့ ပုဂ္ဂလိက ဂျာနယ်တွေဆီမှာ အတင်းကာရော လိုက်ထည့် နေရပါတယ်။ အခုတော့ တစ်မျက်နှာဓါးပြတိုက်ရုံ နဲ့ မကျေနပ်နိုင်တော့ဘဲ နောက်စာမျက်နှာတစ်ဝက်ပါ ထပ်တောင်းနေကြပြန်ပါပြီ။ အခုခင်ဗျားတို့ လုယက်ထားတဲ့ ဂျာနယ်စာတစ်မျက်နှာဟာ ကြော်ငြာ အဖြစ်အသုံးပြုခွင့်ရလို့ရှိရင် သိန်းဂဏန်းတန်တယ်ဆိုတာ ဂျာနယ်ထုတ်ဝေသူတိုင်း အသိပါ။ ရာချီတဲ့ဂျာနယ်တိုင်း ဆီက ခင်ဗျားတို့ လုယက်ထားတာဟာ ပြည်သူတွေ စီးပွားရေးဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နေ တာ ကျွန်တော်တို့ပါဘဲလို့ ၀န်ခံနေသလိုပါပဲ။
ဒီဝဋ်သံသရာငရဲက လွတ်စေဘို့ ခင်ဗျားတို့ဟာ အရင်ဆုံး ခင်ဗျားတို့ချင်း စည်းရုံးရေးကို ဖော်ဆောင်ရမယ်။ စည်းရုံးခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားတို့လက်တွေမှာ စွန်းထင်းနေတဲ့ သံဃာတော်တွေရဲ့ သွေးတွေကို ရေစက်ချ၊ အမျှပေးဝေ ပြီး သတ္တိရှိရှိနဲ့ ကမ္ဘာသိအောင် တောင်းပန်ပါ။
ခင်ဗျားတို့အဓိကကြောက်ရွံ့နေတဲ့ “ငါတို့ကျရှုံးတဲ့ တနေ့ ပြည်သူတွေလက်မှာ မတွေးရဲဘူး” ဆိုတဲ့ အတွေး ကို အပြင်ကို ထုတ်ခဲ့ပြီး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး စားပွဲမှာ ထိုင်ပြီး ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆွေးနွေးပါ။ ပုန်းခိုစရာ မြေနေရာကို တောင်းဆို ပါ။ ခင်ဗျားတို့ဘက်က ဒီလိုပွင့်လင်းခဲ့ရင် ပြည်သူဟာ မကျက်သေးတဲ့ ဒဏ်ရာတွေ ရှိနေသေးသည့်တိုင် သင်ပုန်းချေပေး နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ဒီလိုမလုပ်ခဲ့ရင်တော့ ခင်ဗျားတို့ စစ်ဖိနပ်အောက်မှာ ကျခဲ့၇တဲ့ ပြည်သူနဲ့ သံဃာတို့ရဲ့ မြင့်မြတ်လှတဲ့ သွေး၊ မျက်ရည် တို့ဟာ ဘယ်တော့မှ မခြောက်ခမ်းဘဲ စေးထန်းစွာနဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို ပြန်လည်ဝါးမြိုလာမယ့် သွေး နွံအိုင်ကြီးတွေ ဖြစ်လာရလိမ့်မယ်။ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဒီတစ်ကြိမ် လုပ်ရပ်ကြောင့် မေ့လွယ်ပျောက်လွယ် တဲ့ ဗမာလူ မျိုးတွေဟာ ရင်နင့်အောင် ကြေကွဲရပြီး ရင်တပြင်လုံးဗြန်းဗြန်းကွဲအောင် ခင်ဗျားတို့ကို မုန်းတီးနေလို့ ဒီသွေးနွံ အိုင်ကြီးက စီးဆင်းနေတဲ့ သွေးတွေထဲ မှာ ခင်ဗျားတို့ကို မုန်းတီးရွံရှာနေတဲ့ မျိုးဆက်တွေ တဆက်ပြီးတဆက် ပေါ်ထွန်းလာဦးမှာဘဲ။ ဒါဟာ ခင်ဗျားတို့အတွက် ဘယ်တော့မှမပြီးဆုံးတဲ့ ၀ဋ်သံသရာဖြစ်ပြီး ခင်ဗျားတို့က ပြည်သူတွေရဲ့ အသွေးထဲအသားထဲအထိ ၀င်ရောက်ရိုက်နှက် ပယ်ဖျက်ပစ်လို့မရတဲ့ ဒီမိုကရေစီ အောင် ပွဲကြီးဖြစ်တယ်။
(ရေးသားတင်ပြသူ - မင်းသစ်တည်)
Posted by Ko Niknayman at 5:42 AM Links to this post
စက်တင်ဘာ ၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉၊ ၂၀၊ ၂၁၊ ၂၂၊ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅
စိတ်မခိုင်သူတွေက မျက်ရည်နဲ့ လက်ခုတ်သံရောခဲ့ပြီ၊
အမျိုးသားရေး သွေးထွက်ပွဲတွေ မဖြစ်ရအောင်
ဘုရားရဲ့ တရားရိပ်အောက်က လွတ်ထွက်မသွားဘဲ
ငါတို့လူမျိုးချင်းမမုန်းရ၊ မသတ်ရ၊ မညှင်းဆဲစေရဘူးတဲ့….
အဓမ္မကို ဓမ္မကသာ အမြဲအောင်ရမယ်တဲ့……
ကဲ… ဒီနေ့တော့ ၂၆၊ အဓမ္မသမားက လမ်းရိုး လမ်းဟောင်း
ဘုရားသားတော်၊ ဗုဒ္ဒရဲ့တပည့် သာဝက၊ ဓမ္မရဲ့ဦးသျှောင်တွေကို
နေ့ခင်းကြောင်တောင်နေပူကြဲထဲ၊ မိုးချူန်းဟစ်လို့ ပြည်သူ့ရင်ထဲ
ဘုရားသာဝကတွေကိုတောင် ငါနဲ့ကိုင်တုတ်၊ ဆဲရေးတိုင်းထွာ
မေးပါရစေ… ဒီမြေ ဒီရေဟာ ဘုရားမြေပါလားလို့
ရှေ့တော်ရင်းမှာပဲ တကယ်ကို သတ်ရက်ခဲ့ကြပြီလား
မင်းတို့ရဲ့ နေပျော်မယ့် လှပတဲ့အနာဂါတ်ကိုများ မြင်တွေ့ခွင့်ရနေလို့လား…..
မဖွင့်ရသေးတဲ့ လိုက်ကာတစ်ချပ်၊ ဆွဲမချရသေးတဲ့ ကားလိပ်တစ်ချပ်ပါ။
မင်းရော၊ ငါရော အတူတူ ဆွဲချလို့
(ရေးသားသီဖွဲ့ သူ - August Summer)
Posted by Ko Niknayman at 5:39 AM Links to this post